Madaxweynaha Soomaaliya oo dalka Ivory Coast uga qeybgalaya shirka 5-aad ee madasha iskaashiga Midowga Afrika iyo Midowga Yurub - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Soomaaliya oo dalka Ivory Coast uga qeybgalaya shirka 5-aad ee madasha iskaashiga Midowga Afrika iyo Midowga Yurub
November 30, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha Soomaaliya oo dalka Ivory Coast uga qeybgalaya shirka 5-aad ee madasha iskaashiga Midowga Afrika iyo Midowga Yurub. [Sawirka: Villa Somalia]
Abidjan-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qaybgalaya shirka shanaad ee madasha iskaashiga wadamada Afrika iyo Midowga Yurub oo ka dhici doona magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo wefdigiisa ayaa si diiran loogu soo dhaweeeyay garoonka diyaaradaha Félix Houphouët-Boigny ee Abidjan.
Shirweynaha hoggaamiyeyaasha Midowga Afrika iyo Midowga Yurub oo labo maalmlood socon doona ayaa waxaa lagaga wada hadli doonaa mustaqbalka xiriirka labada dhinac, kor u qaadista iskaashiga ee dhinacyada amniga, socdaalka, horumarinta xirfadaha, shaqo abuurka, xuquuqul iinsaanka, dimuqraadiyadda, dhaqaalaha iyo maalgashiga.
Inta uu shirkani socdo, Madaxweyne Farmaajo ayaa kulamo gooni gooni ah waxa uu la yeelan doonaa qaar kamid ah madaxda halkaas isugu timid si loo sii xoojiyo xiriirka iskaashi ee ay Soomaaliya la wadaagto wadamadaas.
October 10, 2018 Iran waa meesha lagu kala wareejiyo dhoofinta ganacsiga sharci darada ah ee dhuxusha Soomaaliya